iOS 11.3 တွင် Apple က iCloud တွင် Messages ပါဝင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ပြီးခဲ့သည့် WWDC 11 တွင်၎င်းကို iOS 2017 ၏ထူးခြားဆန်းသစ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာပြီးနောက် iCloud ရှိမက်ဆေ့ခ်ျများသည် iOS 11 ၏ပထမ ဦး ဆုံး Betas တွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ ဗားရှင်းအဓိပ္ပါယ်။ လပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Apple သည် iOS 11.3 ကိုယခုနွေ ဦး တွင်ဖြန့်ချိမည့်နောက် version တွင်ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။.
ယနေ့နံနက်အက်ပဲလ်သည်ဤဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အပြောင်းအလဲများကိုမျှော်လင့်နေပြီး iCloud တွင် Messages သဲလွန်စမရှိခြင်းသည်ယနေ့နံနက်ကပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိရိယာများပေါ်တွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအံ့အားသင့်စရာကောင်းစေပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏စာတိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်စေမှာပါ.
အက်ပဲလ်၏စာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ပြီးချိန်မှ စ၍ မက်ဆေ့ခ်ျများအကြားထပ်တူမကျသည်မှာအလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ နောက်ဆုံးကောက်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင်သမားရိုးကျမက်ဆေ့ခ်ျများ (မက်ဆေ့ခ်ျများ) ကိုလက်ခံရရှိချိန်၌ပင်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ဖုန်းသို့ပို့ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျများမရှိသေးသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာအခြေအနေနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းတခုခုမကျန်မီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စာတွေကိုမိတ္တူပွားကူးယူဖို့မမေ့နိုင်ဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့ Messages application ကိုဖွင့်သောအခါအိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းတွင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုရှင်းပြမည်ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာများအားလုံးသည် iCloud တွင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ device အားလုံးအကြားထပ်တူပြုသည်ထို့ကြောင့်တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံအာကာသထဲမသိမ်းဆည်းဘဲမိုin်းတိမ်၌မက်ဆေ့ခ်ျများထားရှိခြင်းအားဖြင့်အာကာသကိုချွေတာနိုင်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်ဆိုဒ်တစ်ခုမှမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုဖျက်သောအခါ၎င်းတို့အားလုံးတွင်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပါပြီရမယ်အဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS 11.3 မှာ iCloud မှာ Messages ပါဝင်တယ်
LCD မျက်နှာပြင်ပါသည့်နောက် iPhone သည်ပုံမှန်ထက် resolution ပိုမိုမြင့်မားမည်ဖြစ်သည်